Deɛ Ɛma Nnipa Ani Gye​—Nneɛma 4
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Norwegian Oromo Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Sɛ meware wo mma a, m’ani bɛgye.”
“Sɛ mesi me fie a, m’ani bɛgye.”
“Sɛ menya saa adwuma no a, m’ani bɛgye.”
“Sɛ menya wei a m’ani bɛgye, sɛ menya wei a, m’ani bɛgye.”
SAA nsɛm yi, woaka bi da? Berɛ a wo nsa kaa adeɛ a worepɛ no, anigye a wonyaeɛ no, ɛda so ara wɔ hɔ? Anaa ate kɔ? Deɛ ɛwom ne sɛ, sɛ worepɛ biribi na wo nsa ka a, ɛma w’ani gye, nanso saa anigye no nka hɔ. Sɛ yɛreka deɛ yɛfrɛ no anigye paa a, ɛnyɛ deɛ obi atumi ayɛ anaa deɛ n’ani da so a ne nsa aka ɛnna ɛde ba. Sɛdeɛ nneɛma pii na ɛka bom ma yɛnya apɔmuden no, saa na anigye nso teɛ; nneɛma pii na ɛde ba.
Ɛsono obiara. Deɛ ɛma w’ani gye no, ɛnyɛ ɛno na ɛma obi ani gye. Adeɛ baako nso ne sɛ, yɛrenyin nyinaa na yɛresesa. Nanso yɛwɔ adanse a ɛkyerɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛyɛ a, daa ɛma yɛn ani gye. Ɛho nhwɛsoɔ nie: Sɛ obi pɛ sɛ n’ani gye paa a, ɛsɛ sɛ ɔma n’ani sɔ deɛ ɔwɔ, ɛnsɛ sɛ ɔyɛ ahoɔyaa, ɛsɛ sɛ ɔdɔ nnipa, ɛnsɛ sɛ ɔma nneɛma ha no ntɛmntɛm sɛe n’anigye. Yɛnhwɛ deɛ enti a ɛte saa.
1. MA W’ANI NSƆ DEƐ WOWƆ
Obi a ɔde n’ani ato fam ahwɛ sɛdeɛ nnipa teɛ kaa sɛ, “Sika nso bɔ onipa ho ban.” Ɔsan kaa sɛ: “Deɛ ɔpɛ dwetɛ no, dwetɛ mmee no, na deɛ ɔpɛ adedodoɔ nso, ahonyadeɛ mmee no. Yei nso yɛ ahuhudeɛ.” (Ɔsɛnkafoɔ 5:10; 7:12) Deɛn na na ɔrepɛ akyerɛ? Deɛ ɛkyerɛ ne sɛ, sika na yɛde twitwa yɛn ho wɔ abrabɔ mu, nanso ɛnni sɛ yɛyɛ adufudepɛ, ɛfiri sɛ deɛ yɛbɛnya biara nso yɛn! Ɔhene Solomon a ɔtenaa ase tete Israel no, ɔtoo ne bo ase hwɛɛ sɛ ahodeɛ ne asetena pa ma nnipa ani gye anaa. Deɛ ɔtwerɛeɛ ne sɛ: “Biribiara a m’ani hwehwɛeɛ no, mamfa ankame no. Mamfa anigyeɛ biara ankame m’akoma.”—Ɔsɛnkafoɔ 1:13; 2:10.
Solomon nyaa sika pii, enti ɔsisii adan akɛseɛ, yeyɛɛ nturo ne atadeɛ, na ɔnyaa nkoa pii nso. Biribiara a ɔpɛ biara, ne nsa kaeɛ. Deɛn na ɔsuaeɛ? Nneɛma a ɔnyaeɛ no maa n’ani gyeeɛ nanso anigye no ankyɛ. Deɛ ɔkaeɛ nie: “Ne nyinaa yɛ ahuhudeɛ . . . na biribiara so nni mfasoɔ owia ase.” Asetena fonoo no mpo! (Ɔsɛnkafoɔ 2:11, 17, 18) Enti deɛ Solomon suaeɛ ne sɛ, sɛ onipa brɛ ne ho pii wɔ wiase mpo a, ne nyinaa yɛ ahuhudeɛ ne ɔbrɛhunu. *
Asɛm a Solomon kaeɛ yi, animdefoɔ a ɛwɔ hɔ nnɛ ahu no saa? Nwoma bi kaa sɛ, “Sɛ onipa nya deɛ ɔbɛdi a, deɛ aka biara nhyɛ da mma n’ani nnye.” (Journal of Happiness Studies) Nokwasɛm a ɛwom ara ne sɛ wiase agyapadeɛ ntumi mma yɛn ani nnye, ɛnkanka ne sɛ obi nam kwammɔne so anya ne ho anaa sɛ ɔde Nyankopɔn bɛto nkyɛn apɛ agyapadeɛ.
BIBLE AFOTUSƐM: “Mommma sikanibereɛ mmma mo asetena mu, na momma deɛ mowɔ no ara nnɔɔso mma mo.”—Hebrifoɔ 13:5.
2. NYƐ AHOƆYAA
Sɛ yɛka sɛ obi yɛ ahoɔyaa a, ɛkyerɛ sɛ “ne yɔnko wɔ biribi a n’ani bere, na ne yam a anka abɛdi ne nsam.” Ahoɔyaa te sɛ kokoram; ɛbɛtumi ama obi agyigya na asɛe n’anigye. Ɛnneɛ yɛmmisa sɛ, Deɛn na ɛbɛma ahoɔyaa agye nhini wɔ obi mu? Yɛbɛyɛ dɛn ahunu sɛ yɛwɔ saa subammɔne yi bi? Yɛwɔ bi a, yɛbɛyɛ dɛn atu aseɛ?
Nwoma bi ka sɛ obi ani bɛbere obi a, na kyerɛ sɛ ɔne onii no bɔ so, ebia ɔne no bɔ tipɛn, ɔne no yɛ adwuma korɔ anaasɛ wɔn nyinaa yɛ asikafoɔ anaa ahiafoɔ. Ɛho nhwɛsoɔ nie: Obi a ɔyɛ sotɔɔ ani mmere obi a ɔyɛ sini. Nanso n’ani bɛtumi abere obi a ɔwɔ sotɔɔ kɛseɛ.—Encyclopedia of Social Psychology.
Asɛm bi a ɛsii tete kyerɛkyerɛ asɛm yi mu. Tete Persia Ahemman mu no, na ahemfie mpanimfoɔ no ani mmere ɔhene a ɔsi so no, nanso na wɔn ani bere Daniel a ɔno nso yɛ ahemfie panin no, ɛfiri sɛ na n’adwenem dɔ sene wɔn. Ná mpanimfoɔ no mpɛ Daniel asɛm koraa, enti wɔfaa akwannuasa nyinaa so sɛ wɔbɛku no! Nanso deɛ wɔyɛeɛ nyinaa ankɔsi aga. (Daniel 6:1-24) Nwoma no ka sɛ, “Sɛ w’ani bere obi a, wonya no koraa a wode abaa bɛbɔ ne tirim aku no. Ahoɔyaa nti na awudisɛm pii kɔɔ so tete mmerɛ mu no.” *
Ahoɔyaa tumi kum obi anigyeɛ, enti nneɛma a atwa yɛn ho ahyia a ɔbɛtumi de agye n’ani no mpo, ɔnhunu
Deɛn na ɛbɛma woahunu sɛ woyɛ ahoɔyaa? Bisa wo ho sɛ: ‘Sɛ me yɔnko nya nkɔsoɔ a, ɛyɛ me dɛ, anaa ɛyɛ me ya? Sɛ me nua anaa obi a me ne no yɛ adwuma yɛ biribi na anyɛ yie a, ɛbɛyɛ me dɛ anaa me werɛ bɛho? Na sɛ obi a ɔnim adeɛ kyɛn me ammɔ mmɔden a, ɛyɛ me dɛ anaa ɛyɛ me ya?’ Sɛ wobua sɛ ɛbɛyɛ wo dɛ a, ɛnneɛ na woyɛ ahoɔyaa. (Genesis 26:12-14) Nwoma no toaa so sɛ “Ahoɔyaa tumi kum obi anigyeɛ, enti nneɛma a atwa yɛn ho ahyia a ɔbɛtumi de agye n’ani no mpo, ɔnhunu. Obi te saa a, anigyeɛ bɔ no sɛdeɛ dwonsɔ abɔ akokɔ no.”—Encyclopedia of Social Psychology.
Sɛ yɛbɛtumi ayi ahoɔyaa afiri yɛn mu a, yɛhia ahobrɛaseɛ. Ahobrɛaseɛ boa yɛn ma sɛ nkurɔfoɔ yɛ adepa anaa wɔwɔ suban pa bi a, ɛyɛ yɛn fɛ ma yɛkamfo wɔn. Bible se, “Mommfa mansotwe anaa animuonyamhunupɛ nnyɛ biribiara, na mmom momfiri ahobrɛaseɛ mu mmu afoforɔ sɛ wɔkyɛn mo.”—Filipifoɔ 2:3.
BIBLE AFOTUSƐM: “Mommma yɛmmpɛ animuonyamhunu, nnsi akan, mmma yɛn ani mmmere yɛn ho yɛn ho.”—Galatifoɔ 5:26.
3. DƆ NNIPA
Nwoma no ka sɛ: “Sɛ yɛn ani bɛgye a, sɛdeɛ yɛne nkurɔfoɔ ntam teɛ ka ho bi paa; yɛn adwuma ne yɛn akatua, baabi a yɛte ne yɛn apɔmuden mpo mma.” (Social Psychology) Deɛ ɛwom ara ne sɛ, sɛ yɛn ani bɛgye wiase a, gye sɛ yɛdɔ nkurɔfoɔ na nkurɔfoɔ nso dɔ yɛn bi. Obi twerɛɛ wɔ Bible mu sɛ: “Menni dɔ a, mensɛ hwee.”—1 Korintofoɔ 13:2.
Sɛ yɛnni dɔ mpo a, ɛnkaa akyi, yɛbɛtumi adɔ nnipa. Wo deɛ yɛnhwɛ Vanessa. Ná ne papa yɛ kɔwensani tirimuɔdenfoɔ. Berɛ a Vanessa dii mfie 14 no, ɔdwane firii fie kɔtenaa nnyanka fie, nanso na ɛhɔ nso nyɛ koraa. Ɔkyerɛ sɛ, ɛhɔ na ɔsrɛɛ Nyankopɔn sɛ ɔmmoa no. Akyire yi, Onyankopɔn tiee ne mpaebɔ enti wɔde no kɔtenaa abusua bi nkyɛn; ɛhɔ deɛ, na wɔde Bible afotusɛm yɛ adwuma. Ná wɔnim sɛ “ɔdɔ wɔ abodwokyɛreɛ na ne yam yɛ.” (1 Korintofoɔ 13:4.) Nnipa a Vanessa ne wɔn kɔtenaeɛ no suban ne deɛ ɔno ara sua firii Bible mu nti ɔtumi yii yea biara firii ne mu na n’adwenem daa hɔ. Ɔka sɛ: “Afei deɛ, mesua adeɛ wɔ sukuu a, na mehunu. Yɛyɛ nsɔhwɛ a, na mebɔ mmɔden paa.”
Vanessa da so di yea wɔ ne mu. Nanso seesei ɔde anigye te awareɛ ase; wawo mmaayewa mmienu.
BIBLE AFOTUSƐM: “Monhyɛ ɔdɔ ɛfiri sɛ ɛyɛ koroyɛ homa a ɛyɛ pɛ.”—Kolosefoɔ 3:14.
4. MMA W’ABAM MMMU
Wiase a yɛwɔ yi, hwan na ne ho atɔ no? Bible kyerɛ sɛ, “esũ wɔ ne berɛ,” na “benabɔ wɔ ne berɛ.” (Ɔsɛnkafoɔ 3:4) Sɛ woamma w’abam ammu a, wobɛtumi afa saa haw no mu ama woato w’awerɛhoɔ agu w’akyi. Momma yɛnhwɛ Carol ne Mildred.
Carol akyi berɛmo asɛe, ɔyare asikyireyareɛ, ɔda a na n’ahome atua; yareɛ bi ayɛ no ama n’ani benkum afira. Ne nyinaa akyi, deɛ ɔka ne sɛ: “Memma m’abam mmu nkyɛ. Metumi di awerɛhoɔ, nanso meyi m’adwene firi so na meda Nyankopɔn ase sɛ metumi yɛ biribi kakra, ɛnkanka ne sɛ metumi boa nkurɔfoɔ.”
Mildred nso, yareɛ pii atu agu ne so; sasaborɔ, nufoɔ mu kokoram, ne asikyireyareɛ. Ɔno nso yɛ n’adeɛ sɛ Carol; ɔntena ase nnwene ne haw ho. Mildred kaa sɛ: “Mehunu nkurɔfoɔ a yareɛ reteetee wɔn a, mebɛn wɔn kyekye wɔn werɛ. Mereyɛ saa nyinaa na m’adwene refiri me haw so.”
Carol ne Mildred kyekye afoforɔ werɛ; ɛma wɔn ani gye
Mmaa mmienu yi, obiara hwehwɛ ayaresa papa, nanso ɛnyɛ apɔmuden no na ɛhia wɔn kɛse; deɛ ɛhia wɔn paa ne adeɛ a wɔde wɔn adaagyeɛ yɛ. Ɛno nti wɔwɔ akomam anigyeɛ, na obiara ntumi nnye mfiri wɔn nsam. Bio nso nkurɔfoɔ pɛ wɔn asɛm paa, na wɔn a wɔnam amanehunu ne abɛbrɛsɛ bebrebe mu hwɛ wɔn a, ɛma wɔnya awerɛkyekyerɛ.
BIBLE AFOTUSƐM: “Anigyeɛ ne deɛ ɔkɔ so gyina sɔhwɛ mu, ɛfiri sɛ sɛ wɔgye no tom a, ne nsa bɛka nkwa abotire” no.—Yakobo 1:12.
Afotusɛm a ɛwɔ Bible mu no yɛ “nkwa dua ma wɔn a wɔsɔ mu, na wɔn a wɔkura mu den no, wɔbɛfrɛ wɔn anigyeɛ.” (Mmebusɛm 3:13-18) Wopɛ sɛ wohunu sɛ saa asɛm no yɛ nokorɛ? Ɛnneɛ fa Bible mu afotuo bɔ wo bra. Yehowa a Bible firi ne hɔ no, yɛfrɛ no “anigyeɛ Nyankopɔn” na ɔpɛ sɛ wo nso w’ani gye.—1 Timoteo 1:11.
^ nky. 11 Deɛ Solomon yɛeɛ nyinaa, ɛho asɛm wɔ Ɔsɛnkafoɔ 2:1-11.
^ nky. 17 Onipa baako a yɛde bi dii no ne Yesu Kristo. Marko 15:10 ka sɛ “ahoɔyaa nti na asɔfoɔ mpanimfoɔ” de Yesu maeɛ sɛ wɔnku no.
Hunu sɛ Mfomsoɔ Wɔ Nnipa Ho
Nkurɔfoɔ a wɔn abam mmu ntɛm no, sɛ wɔdi mfomsoɔ a, wɔmmu wɔn ho fɔ nka sɛ “meyɛ nipahunu,” “mennim hwee yɛ.” Bible ka sɛ: “Honhom a abotoɔ ma nnompe mu wewe.” (Mmebusɛm 17:22) Nwoma bi ka sɛ, sɛ wompɛ sɛ w’abam bu ntɛm a, “ɛsɛ sɛ wohunu sɛ mfomsoɔ wɔ nnipa ho. . . . Wodi mfomsoɔ a, deɛ wobɛyɛ wɔ ho na ɛbɛkyerɛ sɛ w’abam bɛbu anaa w’abam mmu.”—The Power of Resilience.
“Monkyerɛ Nneɛma Ho Anisɔ”
Saa afotu pa yi wɔ Kolosefoɔ 3:15. Nkurɔfoɔ ayɛ nhwehwɛmu ahunu sɛ, sɛ yɛtena ase hwɛ nneɛma pa a yɛatumi ayɛ, na yɛma yɛn ani sɔ deɛ nkurɔfoɔ ayɛ ama yɛn a, ɛma yɛn ani gye.